Zimbabwe celebrates Mugabe resignation
Zimbabweans celebrated late into the night after Robert Mugabe resigned as president,a post he held for 37 years. His ally turned rival, former Vice-President Emmerson Mnangagwa, is expected to return from neig
Zimbabwe's ruling party has sacked Robert Mugabe as its leader, as pressure intensifies for him to step down as president, a BBC report said. Zanu-PF appointed ex-Vice-President Emmerson Mnangagwa, who was
Zimbabwe's long-time President Robert Mugabe, put under house arrest by the military, is reportedly refusing to step down immediately, despite growing calls for his resignation, a BBC report said. The milit
Zimbabwe’s military took control of the country early Wednesday and detained its longtime leader, President Robert Mugabe, capping a political showdown over Mugabe’s apparent attempts to install his wife as his successor.
InterContinental Hotels Group (IHG) has announced the opening of its new Holiday Inn in Mutare, Zimbabwe. The franchised property, owned by African Sun Limited, features 96 rooms, an outdoor pool and a meeting room capable of seat
Voted best climate destination in 2010 by the International Leisure magazine in 2011 and scooped the European Council on Tourism and Trade Best Destination Award in 2014, Zimbabwe is on an amazing bounce back in terms of its tourism offering.
Major US airlines ban trophy hunter shipments
Three US airlines have banned the transport of lion, leopard, elephant, rhino or buffalo killed by trophy hunters, in the latest fallout from the killing of Zimbabwe's Cecil the lion last month. American Airlines said on Tuesday it